Valinteny Manoloana ny Fisalasalana amin’ny Roboton’i Kremlin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2015 15:43 GMT
Sary avy amin'iKevin Rothrock.
Tany am-piandohan'ity volana ity, namoaka fanadihadiana tambajotra amin'ireo kaonty Twitter an'arivony voalaza fa mibaiko tena ilay mpikaroka ara-ateriento Lawrence Alexander , manasongadina fikasana mavitrika amin'ny fanodikodinam-baovao ao amin’ny RuNet. Raha nahazo ny fitodihan'ny fampitam-baovao sy tambajotra sosialy Rosiana ny fanadihadiana nataony, dia niresaka momba ny fisalasalana amin'ny tambajotran-droboto sy izay niaviany i Alexander
Somary nahasarika ny sain'ny fampahalalam-baovao ny fanadihadiako momba ny hafatra mitovy mihoatra ny 20000 ataon'ny mpanohana an'i Kremlin ao amin'ny Twitter sy manaporofo ny fisaritahana amin'ireo adihevitra sasantsasany ao amin'ny RuNet, ka tiako ankehitriny ny mamaly ireo tsikera sasany.
Misy ireo Rosiana mpaneho hevitra sasantsasany nanintsana ny fanodinkodinan-doha ataon'ny mpanohana an'i Kremlin amin'ny tontolon'ny Twitter, nilaza fa natsangana tsy ho amin'ny tanjona ara-barotra loatra na amin'ny “spamming” ireo kaontin'ny roboto mibaiko tena sy tantanin'olona ireo. Sputnik News, ohatra, naka ity fijoroana ity:
Ny tanjon’ [ny fanasoketana] dia tsy ny hanodina ny hevi-bahoaka, fa ny hahatsara toerana azy eo amin'ny milina fitadiavana (SEO): milina fitadiavana tahaka ny Google mamakivaky ny habaka amin'ny teny fanalahidy sy rohy, izay ampiasaina mba hanomezan-danja ireo pejy habaka sasany rehefa tafiditra ny teny karohana.
Na dia izany aza, tsy nahafahana nanazava ny fitongilanana miharihary amin'ny fanohanana an'i Kremlin izany, ary tsy manana soso-kevitra amin'izay tena mahazo tombotsoa amin'ny fitantanana kaonty ankoatra ny “fijoroan-kevitra ara-politika.” Tsy mampihevitra ihany koa io fa mety mampiasa tetikady mitovy amin'ireo mpanao spam ireo minia mampiely hevitra diso, ary izy roa ireo dia mba ahitana izay tian-ko hita sy mba “hampitombina fandavana”.
Amin'ny fanadihadiako, kely ny porofo hitako amin'ny tanjona ara-barotra ambadiky ny tambajotran-droboto. Tsy mifandray amin'ireo habaka lehibey na mizara rohy toa mampiahiahy ny ankamaroan'ireo sioka. Ary rehefa hitako fa vitsy no tena izy ireo kaonty (izany hoe tena misy olona mitantana azy), toa tsy azo inoana fa anisan'ireo mpanjohy nokaramaina hanaraka olona tena izy na fikambanana marobe izy ireo.
Nametraka fisalasalana amin'ny zava-bitan'ny tambajotran'ny roboto ny hafa, mihevitra fa zara raha mifandray amin'ny hafa izy ireo.
Mino aho fa miankina amin'ny Fitadiavana amin'ny Twitter sy ny Zava-malaza miseho ny valinteny. Ny fomba tsara handravahana izany dia ny fijerena izay ahitana ireo roboto ireo mampiely lahatsoratra vaovao ao amin'ny siokan'izy ireo.
Tamin'ny Martsa 2015, nanamarika ny fizarana imbetsaka an’ity lahatsoratra retweet ity i Keir Giles, talen'ny Foibem-pikarohana sy Fanadihadiana momba ny Ady ao amin'ny Chatham House sady namana ao amin'ny Fandaharan'asa Eurasia sy Rosia. Ao anatin'ny lahatsoratra, miezaka mampisy fisalasalana amin'ny porofo fa notifirina tamin'ny balafomanga BUK ny fiaramanidina MH-17 ireo olona nohadihadiana .
Tsy nahitan-teny tamin'ny fitifirana ny MH17 ireo mpamolavola ny Su-25; mampandroandroatra kokoa ireo Rosiana mpanasoketa
Nampiasa ny NodeXL aho mba hanangonana ny santionany tamin'ny tambajotra Fikarohana amin'ny Twitter momba ireo lohateny hita ao amin'ireo sioka: “Afaka mitifitra Boieng ve ny fiaramanidina kely mpiady Su-25? Miresaka momba ny fanambaran'ny MH17 ireo mpanamory teo aloha.”
Mampiseho ireo kaonty mizara ny lahatsoratra ho toy ny “vona (noeuds)” boribory ny sary (eto ambany) avy amin'izany. Nivondrona ao anatin'ny sampan-doko ireo mpifandray akaiky amin'ny fanarahana sy ny fanononana. (Mifototra amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny hafa ao amin'ny tambajotra ny habeny.)
Tambajotran'ireo kaonty Twitter mizara ny vaovaon'ny Russia Today momba ny MH17. Sary avy amin'i Lawrence Alexander.
Ny lehibe eo afovoany – noho ny antony mazava – dia kaontin'ny RT (Russia Today), rt_america sy rt_com. Mampiseho ny isan'ireo mpisioka manohana ny Rosiana mifanjohy sy mifandray kosa ny loko maintso eo ambony be mpifandray indrindra: ohatra: @gbabeuf sy @novorossiyan. Saingy hita ao ivelan'ny rojo kosa ny ankamaroan'ireo tsy mitonona anarana, mampiseho ny tsy fisian'ny fifandraisana sy ny tsy fisian'ny fanarahana mpiserasera mazava.
Satria hoe voaavaka ireo roboto ireo dia tsy midika fa tsy manana fiantraikany ny nataon'izy ireo. Ny fampiasan'izy ireo miverimberina ny teny fanalahidy, ny fehezan-teny sy ny lohatenim-baovao dia misy fiantraikany eo ny valim-pikarohana amin'ny Twitter sy ny lohahevitra malaza, ka na iza na iza mitady sioka momba ny MH17, ohatra, dia afaka mahita tantaran'ny RT miverimberina, manondrotra ny lazany. (Tsy misy ny porofo fa misy ifandraisany amin'ny RT ireo roboto).
Voaràra mazava amin'ny fitsipiky ny Twitter ireo paikady ireo, kanefa tsy nanakana ireo tambajotran'ny roboto hisandoka ao amin'ny fitantaram-baovao amin'ny Twitter izany, mety hisy fiantraikany amin'ireo lohahevitra malaza. Raha tsy manamafy ny fiarovany manoloana ny fisoratana anarana marobe amina kaonty ny tambajotra sosialy, mety mbola hitohy izao ezaka fanodikodinana izao.